ईन्टरनेटमा नेपाली भाषाको लागि यो हप्ता विशेष रह्यो । रोमनाइज्ड नेपाली युनिकोडमा आधारित एन्ड्रोइड एप 'हाम्रो नेपाली किबोर्ड' यसैहप्ता गुगल प्लेस्टोरमा सार्वजनिक भयो भने गुगलले आफ्नो ट्रान्सलेसन टुलमा नेपाली भाषा समावेश गर्यो।
Read --> Best Nepali Keyboard for Android - Hamro Keyboard
गुगल ट्रान्सलेसन टुलमा नेपाली भाषा समावेश भएसँगै, हामी विश्वका विभिन्न ८० वटा भाषासँग ईन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिन पुगेकाछौँ । यो पटक नेपाली, पञ्जावी, मंगोलियन आदि नौ भाषालाई ट्रान्सलेसन टुलमा समावेश गरिएको, गुगलले आफ्नो ब्लगमा उल्लेख गरेकोछ । अब नेपाली भाषामा लेखिएको साइटहरुलाई गुगलले 'हिन्दी' को 'सट्टा' नेपाली उल्लेख गर्नेछ । साथै अब इन्टरनेटमा देखिने अधिकांश कुराहरु पनि नेपाली भाषामा पढ्न सकिनेछ भने नेपाली भाषामा लेखिएका कुराहरु पनि अन्य भाषा बोल्ने/लेख्नेहरुले उनीहरुको आफ्नै भाषामा पढ्न पाउनेछन् । जस्तो, अब नेपालीले 'चिनिया' भाषामा लेखिएको कुराहरु नेपालीमा पढ्न सक्छन्, अनि नेपालीमा लेखिएका कुराहरु 'चिनिया'हरुले आफ्नै भाषामा पढ्नसक्छन्।
गुगल नेपाली ट्रान्सलेट पर्फेक्ट छ त?
गुगल डेभ्लपर ग्रुप काठमाडौँ लगायत अन्य साथिहरुको लगातारको प्रयास पछि गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा त आइपुगेको छ । तर अझ यसमा धेरै गल्तिहरुछन्, गुगल नेपाली ट्रान्सलेट पर्फेक्ट छैन । अब यसलाई सुधार्ने जिम्मा हामी सबै नेपाली भाषालाई मन पराउने व्यक्तिहरुको हो ।
गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा समावेश गरेको सम्बन्धमा मैले गुगलका नेपालस्थित 'कन्ट्रि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट' सरोज ढकाललाई सम्पर्क गरेको थिँए । जवाफमा गुगल दक्षिण एसियाकी कम्युनिकेशन हेड मिरियम बुब्लिलले "भर्खरै गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली समावेश गरिएकोले यसबारे धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही नरहेको" बताइन् । साथै, गुगलमा नेपाली ट्रान्सलेट पर्फेक्ट छैन भन्ने मेरो जिज्ञासामा, "गुगल ट्रान्सलेटमा समय सँगै सुधार हुँदै जाने" जानकारी मिरियमले दिइन् । गुगल ट्रान्सलेटले कसरी काम गर्छ यहाँ गएर पढ्न सकिन्छ ।
गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा सुधार गर्न कसरी सहयोग गर्ने?
गुगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा सुधार गर्न हजारौँ भोलुन्टियरहरु आवश्यक छन् । हामी आफैँले नै नेपाली भाषा सुधार गर्नसक्छौँ, गुगल ट्रान्सलेटलाई सल्लाह दिनसक्छौँ । गुगल ट्रान्सलेटमा भोलिन्टियर बन्न इच्छुकहरुले यहाँबाट भोलिन्टियरको लागि साइन अप पनि गर्नसक्नुहुन्छ ।
त्यसबाहेक गुगल ट्रान्सलेट गर्दा गलत अर्थ लाग्ने शब्दहरु भेटियो, ट्रान्सलेसन मिलेन भने त्यहीँबाट पनि सही शब्द आफूले दिएर गुगल ट्रान्सलेटलाई सुधार गर्न सकिन्छ । आज दिउँसो ट्विटरमा केही रमाइला ट्रान्सलेसनहरु देखियो जुन रमाइला त थिए तर गलत अर्थ दिइरहेकाथिए ।
जस्तो कि, 'we are Gorkhali' भन्दा गुगल ट्रान्सलेटले 'हामी फिलिपिन्सबाट हो' भन्ने ट्रान्सलेसन देखायो, जुन आफैँमा गलत छ । त्यसलाई मैले दायाँछेउमा रहेको 'रेट ट्रान्सलेसन'मा 'क्लिक' गरेर, ट्रान्सलेसन गलत भयो भन्दै गुगललाई रिपोर्ट गरेँ अनि सही शब्द के हुन्छ भनेर गुगललाई सल्लाह पनि दिँए ।
अघिल्लो ट्विटको उदाहरणको लागि यो हेर्नुहोला । Gorkali लाई गोर्खाली नै बनाउने सल्लाह दिइयो । गलत भएको ठाउँमा सच्याउँ। pic.twitter.com/2NZV7Awhec
— Aakar Anil (@aakarpost) December 11, 2013
त्यसो त गुगलले नेपालीलाई अंग्रेजी र अंग्रेजीलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्न सहयोग पनि मागिरहेकोछ । यहाँबाट पनि आफ्नो भाषालाई राम्रो बनाउन गुगललाई सुझाव दिन सकिन्छ ।
Puran Pandey December 11, 2013 at 6:28 PM
thanks to google as well you too aakar bro for perfect blogging . आकार ब्रो एउटा कुरा सोध्न मन लागि हाल्यो यहि बेलामा - यो गुगल इन्पुट टूल बाट टाईप गर्दा अरु त सबै भेटियो तर हाम्रो नेपालीको फुलस्टप(पूर्णविराम) चै भेटिन हउ मैले.... अहिले सम्म काम चलाउको लागि यो ठाडो धर्सो " | " प्रयोग गरि रहेको छु | ठ्याक्कै मिल्ने चै भेटिन्न ? थाहा भएमा यसो जानकारी गराउन नु है
Aakar Anil December 11, 2013 at 6:32 PM
गुगल इनपुट टुलको बारेमा खासै धेरै जानकारी छैन । तर कम्प्युटरको लागि हो भने रोमन युनिकोड टुल राख्दा हुन्छ, त्यसमा सबै कुरा पर्फेक्ट छ । --> http://www.aakarpost.com/2007/12/romanized-unicode.html
अनि एन्ड्रोइड फोन हो भने, हाम्रो किबोर्ड राख्नुहोला । पूर्णविराम लगायतमा समस्या छैन । --> http://tech.aakarpost.com/2013/12/best-nepali-keyboard-for-android-hamro-keyboard.html
Akshay Mitra December 14, 2013 at 7:08 PM
Mashable is nowashape, because of link popularity with
instant Backlinks at social
bookmarking site of http://www.mspidy.com